Stadia: Nkọwa niile maka ịkwanye egwuregwu Google | Gam akporosis
Stadia: Nkọwa nkọwapụta niile na Google Video Game Streaming
Ọnwa ole na ole gara aga Google gosiputara Stadia, ikpo okwu nke ya maka egwu egwuregwu vidio. Ọ bụ ezie na ngosi ya, ụlọ ọrụ ahụ hapụrụ anyị ọtụtụ obi abụọ, ebe ọ bụ na ọ bụghị akụkụ niile dị mkpa banyere ikpo okwu a ka ekpughere. N'ikpeazụ, nke a emeworị, yabụ na anyị maara ihe niile banyere ya.
Ọ bụ oru ngo jupụtara n'ọchịchọ maka ụlọ ọrụ ahụ. Stadia na-achọ ịga n'ihu otu nzọụkwụ ma e jiri ya tụnyere nyiwe ndị ọzọ nke gụgharia, ebe ha na-achọ ịbụ ọrụ nke anyị nwere ike igwu egwu mgbe ọ bụla anyị chọrọ, na-enweghị ya dị mkpa ebe anyị nọ. Ihe ikpo okwu juputara na uzo di otua.
Companylọ ọrụ ahụ hapụrụ anyị ụbọchị ya nwere nkọwa ụfọdụ gbasara onwe ya, ma akụkụ ndị dị mkpa na-efu ka a mara. Ihe ha mechara gosi anyị ugbu a, yabụ anyị maara ego ole Stadia ga-efu kwa ọnwa, na mgbakwunye na obere ihe achọrọ iji kpọọ. Na nkenke, ozi gbasara ndị ọrụ. Njikere ịchọta?
Apple na-ejikwa Apple Arcade ezubere iche egwuregwu vidiyo
1 Iwu chọrọ
2 Google Stadia ịnye ọnụahịa
3 Egwuregwu dị na Stadia
N'okwu ya banyere ikpo okwu, Google hapụrụ anyị ụfọdụ nkọwa banyere ya. Ihe ndị achọrọ maka ya bụ akụkụ nke mepụtara mmasị, ịmara onye ga-enwe ike igwu egwu na ọrụ iyi a. N'ụzọ dị mma, a hapụrụrịrị nkọwa kachasị mkpa na nke a. Ihe achọrọ iji nwee ike igwu egwu bụ:
Mkpebi: Ruo 4K HDR na 60fps (na mbido) na 8K ma karịa 120fps na-aga n'ihu (ọ nweghị ụbọchị)
Nhazi oru ngo: Ruo 1080p na 60 fps
CPU: Omenala 2,7 GHz hyperthreaded x86 CPUs na AVX2 SIMD
GPU: AMD omenala nke nwere kọmpụta 56 maka 10,7 Teraflops nwere ebe nchekwa HBM2
Ihe eserese API: Vulkan nwere arụmọrụ di elu na eserese 3D
Ram: 16 GB jikọtara VRAM na RAM
Datalọ Ọrụ Data Google: Karịa 7500 ọnụ ọgụgụ ntanetị Google Edge Network
Njikwa: WiFi na njikọ kpọmkwem na Google Stadia
Ndakọrịta na: Google Cast, PC site na Chrome, iOS, Android, Chromecast, TV
Enwere akụkụ ndị dị oke mkpa, dịka mkpebi. Kemgbe mmalite, na mbido ya, e webatara mkpebi ụfọdụ. Ọ bụ ezie na Google na-ezube ịgbasa nke a maka ọdịnihu, ma n’echiche a, ha enwebeghị ike inye anyị ụbọchị n’ụbọchị a. Mana atụmatụ ụlọ ọrụ ahụ ga-enye mkpebi 8K. Anyị kwesịrị ichere obere oge maka ya.
Google Stadia ịnye ọnụahịa
Nkọwa banyere Stadia nke anyị na-amaghị n'oge ya, mana nke ahụ nwere nnukwu mmasị nye ndị ọrụ, bụ ọnụahịa nke ọrụ a ga-enwe. N'ikpeazụ, e gosipụtawo ọnụahịa ha. Dị ka ị maraworị, anyị na-eche ihu na ndenye aha ọrụ, nke mere na anyị ga-akwụ ụgwọ ego kwa ọnwa, iji nwee ike ịnweta ya. Emechara ka ọnụego gọọmentị kwenye ọnụego gọọmentị ahụ.
Na mbu, anyị hụrụ Stadia Pro, nke ọnụ na $ 9,99 / ọnwa ma hapụ anyị mkpebi ruo 4K na 60fps. Site na ndenye aha a, anyị ga-enwe ike ịnweta egwuregwu niile n'elu ikpo okwu, belụsọ ndị ọhụrụ. A ga-enye anyị nhọrọ ịzụta ụdị egwuregwu ahụ. Ọrụ nke doro anya na ọtụtụ ndị ọrụ ga-enwe mmasị. Egwuregwu ọhụrụ ahụ, nke na-adịghị na ndenye aha, anyị ga-azụta ha iche iche.
Na 2020, Google nwere olile anya inwe ụdị ọrụ a ga - akwụ ụgwọ. Nke a bụ Stadia Base, nke anyị na-agaghị akwụ ụgwọ ego kwa ọnwa. Anyị ga-enweta n'efu, ọ bụ ezie na mkpebi ahụ ga-adị ala na nke a, na mgbakwunye ịnweta ohere ole na ole egwuregwu, ọ bụ ezie na nke a abụghị ihe ekwenyela ugbu a. Mana egosiri ya dika nhọrọ nke otutu ndi n’enye ahia.
N'aka nke ọzọ, a na-akpọ mbido ntọala nke Stadia, nke anyị nwere ike ịhụ dị ka ụdị mbido mkpọ. N'ime ngwugwu a, anyị nwere njikwa nke ikpo okwu, nke ọnụahịa ya bụ euro 69 iche, a Chromecast Ultra, egwuregwu Destiny II, na mgbakwunye na ọnwa atọ nke ndebanye aha n'efu maka ụdị Pro. A na-ewebata Buddy Pack, nke mere na enyi nweta egwuregwu n'efu. A malitere mkpọ a na ọnụahịa nke euro 129. Can nwere ike ịgba akwụkwọ ugbu a na ụlọ ahịa Google.
Egwuregwu dị na Stadia
Google ekpughebeghị ndepụta egwuregwu zuru ezu anyị ga-ahụ na ya. Anyị maara na e nwere ngụkọta nke egwuregwu 31 ga-adị na ya, mana ndepụta zuru ezu nke ha na-efu. N'ụzọ dị mwute, anyị nwere ụfọdụ egwuregwu a kwadoro nke anyị ga-ahụ na Stadia. Nke a bụ ndepụta:
Ihe Odide nke Creed Odiri
Ọnụ ụzọ ámá Baldur nke 3
Ndị na-agba ọchịchịrị: Jenesis
Akara Aka 2 - Odikwa n’aka ndi guzobere ya
Ghost Recon: Nkọwa
Tomb raider: Rise nke Tomb raider
Tomb raider: onyinyo nke Tomb raider
Ihe ọzọ dị mkpa dị oke mkpa bụ mgbe a ga-ebido Stadia n'ahịa. Google n'onwe ya enyela anyị ozi a. Anyị ga-echere maka oge mgbụsị akwụkwọ, dị ka anyị maara. Ọ ga-abụ n’ọnwa Nọvemba mgbe a malitere ya, na ngụkọta nke mba 14 gburugburu ụwa, gụnyere Spain. Ndị a bụ mba:
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » Stadia: Nkọwa nkọwapụta niile na Google Video Game Streaming
A na-arụ ọrụ Google Nest Hub na Spain
Samsung Galaxy M40: ndị a niile bụ nkọwa leaked tupu ya igba egbe